• Iibhokisi ezi-2 ezimhlophe ezimhlophe (ukhilimu) iiparele ze-pearl kunye ne-iris ezine-6 ​​mm (KB):
• Ibhokisi eli-1 lomgca omhlophe (i-cream) ubuhla be-pearl kunye ne-iris enobubanzi be-8 mm (K8);
• Ibhokisi e-1 yedayimani yobude ngegolide eline-diameter ye-2.2 mm:
• Iingubo zegolide ezili-10 ezineengqimba ezine-4 mm ububanzi:
• I-openness yegolide yokuvulela i-lock 1;
• Izixhobo ezi-6 zegolide;
• 2 m ngentambo ye-nylon elubala kunye nobubanzi be-0.35 mm.
Lo msesa owenzela imodeli kwisitayela seklasi iya kuncedisa iingubo zokuhlwa nasemini.
• Sika u-55 cm ngentambo yeyiloni. I-clamp yoku-1. Faka ukuphela komgca kwisangqa ye-1 yenye inxalenye yentsimbi, uze ubuyele kwisihlwitha, uhlambe i-clamp kunye neeplisi.
• Ngomgca ofanayo, intambo yeeshumi ezili-10. Emva koko u-1 KB ne-1 bead. Phinda ubeke amanye amaxesha angama-55. Emva koko umgca we-9 ubude kunye ne-1 clamp. Xoxa ekupheleni komgca kwisangqa yokuqala yenye inxalenye yentsimbi, uze ubuyele kwisihlwitha, uyibeke ngeepelisi. Sika umtya ogqithisileyo kunye neesikisi.
• Sika u-65 cm ngentambo yeyiloni. Umgca we-String 1, cwangcisa ukuphela komgca kwisangqa sesi-2 enye inxalenye yentsimbi, uze ubuyele kwisihlwitha uze uyibeke ngeepelisi.
• Kulo mgca, thayipha ubude be-20.
• I-String 1 K8 kunye ne-1 bead. Phinda le setethi ezili-18 ngaphezulu.
• I-String 1 K8 kunye ne-1 rondel kunye neentsimbi. Phinda le setethi ezili-9 ngaphezulu.
• I-String 1 K8 kunye ne-1 bead. Phinda amaxesha angama-19.
• Gcwalisa umgca we-2, u-19 ubuhla kunye ne-1 clamp. Cinga ukuphela komgca kwisangqa sesi-2 senye inxalenye yentsimbi, uze ubuyele kwisihluthulelo. Gcwalisa i-clamp ngeepliers. Sika umtya ogqithisileyo kunye neesikisi.
• Sika i-80 cm yentambo yeyiloni. Umgca we-String 1, cwangcisa ukuphela komgca kwisangqa yesithathu kwinxalenye yokuqala yeskhiya, uze ubuyele kwisihluthulelo, ucwecwe ngamapelisi.
• Kulo mgca, thayipha ububanzi be-30. Emva koko, izihlandlo ezingama-77 ze-1 KB ne-1 bead. Emva koko umtya we-29 ubude kunye ne-1 clamp. Cinga ukuphela komgca kwisangqa yesithathu yesahlulo sesibini senkikhi, uze ubuyele kwisihluthulelo, udibanise i-clamp. Sika umtya ogqithisileyo kunye neesikisi.
Ungathatha indawo yeendonga zegolide kunye neendonga ngeesilivere. Kule meko, kufuneka uguqule umbala wekhikhi.
Iphephancwadi elithi "Bizhu" № 21
Iintlobo zeentyatyambo ezivela kwiintyatyambo zegadi
IsiTymatic modular origami
Ukutya ngexesha lokuncelisa
Ungakhetha njani ukutya okusemntwaneni?
Indawo ekhuselekileyo emotweni yomntwana